काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले गरेको कर्म देखेर चालक ट्वाँ परे, ट्याक्सी हल्लिरह्यो त्यसपछि? – Dailny NpNews
काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले गरेको कर्म देखेर चालक ट्वाँ परे, ट्याक्सी हल्लिरह्यो त्यसपछि?
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १२, २०७८ समय: १२:३८:३०
ट्याक्सी चालक दीपक खड्काको अनुभवस्
उनले ‘दाइ तपाईंले के गर्नुभएको यस्तो’ भनेँ। उनीहरुले ‘तँलाई पैसा दिएकै छ। पैसा तिरेपछि ट्याक्सी हाम्रै हुन्छ’ पो भने। उनले लाजिम्पाट पु(याएर फर्किए। एक जोडी म’स्किँ’दै, जि’स्किँ’दै ट्याक्सी भएको ठाउँमा आएर गोकर्ण जाऊँ न भने। उनीहरु गफमै मस्त थिए। गफ सुन्नै ला’ज लाग्नेखालको थियो रे। ‘अस्ति क’त्ति’को म’ज्जा’ आ’यो’ केटाले सोध्यो। ‘मलाई त निकै दु’ख्यो नि’ केटीले जवाफ फर्काइन्। केटाले आज रमाइलो गर्नुपर्छ है भने।
गोकर्णकोे एउटा रिसोर्टमा बस्ने कुरा गर्दै थिए। गोकर्णको रिसोर्ट अगाडि रोक भने उनले रोके। पैसा तिरेर दुवै गए। ‘ट्याक्सी चढाएदेखि म’स्तसँ’ग कि’स ग’र्दै म’ज्जा लिइरहेका थिए,’ कृष्णले भने, ‘मेरो काम भनेको ठाउँमा पु(याउने थियो पु(याइदिएँ।’ कसै कसैको योजना भने पूरा हुन्न।
‘पु(याइदिएबापत २ हजारजति आउँछ, त्यही खोज्न आएकालाई पु(याउनु अ’प’रा’ध पनि त हैन,’ ती ट्याक्सी चालकले भने, ‘तर म आफैँ यात्रुलाई सोध्दिनँ। सोधे भने स’म्पर्क गराइदिन्छु।’ तर सबै चालक दलाल हुन्नन्। तर प्रायः यात्रुमा त त्यही छाप छ। त्यसैले बेलुकातिर ‘केटी मिला’इ’देऊ न’ भन्ने यात्रु टन्नै भेट्छन् ट्याक्सी चालकहरुले।
प्रायः भारतीय पर्यटकले ट्याक्सी चालकलाई यौ’ ‘नकर्मीको द’लालै सम्झँदा रहेछन्,’ सापकोटाले भने, ‘जो भेटिए पनि दाइ ल’ड्की’ मि’ला’इदे’ऊ न भन्ने मात्र भेटिन्छन्। ल’ड्की’स’ड्की थाहा छैन भन्दा पत्याउँदैनन्। ह’प्का’उनै’पर्छ।’ भारतीय पर्यटक मात्रै हैन, यतैतिरका आन्तरिक पर्यटकले पनि यस्तै गरी है’रा’न बनाउने रहेछन्।
ट्याक्सीमा ठगि कहिले रोकिन्छ रु
यात्राको लागी छिटो र सजिलो हुने भएकाले ट्याक्सीको माग धेरै हुने गरेको छ । तर ट्क्सी चालकको ठगी पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । यात्रुको प्रतीक्षामा बसेका ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैनन् । ट्याक्सी चालकले तोकेको मूल्य तिर्न सर्वसाधारण बाध्य भएका छन् । हतारमा हिड्नु पर्ने हुंदा उनिहरुले मागेकै भाडा तिर्नुपर्ने आफुहरुको बाध्यता पर्ने ट्याक्सी यात्रुहरु बताउछन् । यात्रुहरुले आफु ठगिएको गुनासो बर्षौदेखि गर्दा पनि स्पष्ट नीति, पारदर्शी व्यवहार, उचित प्रतिफल र यात्रुलाई ठगीबाट बचाउने जिम्मेवारी सरकारले पालना नगरेको यात्रुहरुको भनाई छ ।
काठमाडौंमा ट्याक्सी चाहियो रु अब मोबाइल एपबाटै बोलाउनुहोस्
भनेको समयमा ट्याक्सी नपाएर हैरान हुनुहुन्छ रु काठमाडौंमा आफू भएकै ठाउँमा भन्ने वित्तिकै ट्याक्सी पाइँदैन । अझ मिटरमै गुड्ने ट्याक्सी पाउन त झन् गाह्रो ।
कसरी खोज्ने ट्याक्सी रु
आफ्नो नजिकै रहेको ट्याक्सीलाई तपाईले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईले गरेको अनुरोध ट्याक्सीले स्विकारेपछि तपाईले ट्याक्सी लिएर हिँड्न सक्नुहुनछ । आफ्ना केही कुरा भएमा एप मार्फतै चालकलाई भन्न पाउने सुविधा पनि त्यहीँ रहेको छ